Indlela yokubuyisela kwakhona iMeyile yakho eKhanada kwi-Post Office
Landela ezi 6 eziManyathelo ezilula ukuthumela ngokukhawuleza iMail yakho kwiPost Office
Ukuba uhamba, qiniseka ukuba ulungiselele ukuba i-imeyile yakho iqondiswe ukuze ungaphuthelwa nantoni ebalulekileyo. Le miyalelo kukuba idilesi yakho yeposi ishintshwe kwiofisi yokuposa. Ungasebenzisa kwakhona iNguqulelo yeeNtanethi kwiNkonzo ye-Intanethi ukuze uthumele i-imeyile yakho ngekhompyutha.
Ngaba kufuneka uqondise kwakhona iMeyile yakho?
Ukuze uqhubeke nokufumana i-imeyile kwidilesi entsha, uzakufuna ukusebenzisa i-Canada Post kumntu okanye inkonzo ye-intanethi ukuthumela i-imeyile yakho.
Ungasebenzisa iCanada Post ukuhambisa iinkonzo zombini ezisigxina kunye nexeshana. Xa usenza ukunyakaza okusisigxina, ungakhetha ukuba uthumele iposi yakho ngeenyanga ezine okanye omnye unyaka. Xa usenza ukuhamba kwesikhashana, unokukhetha ukuhamba phambili kweenyanga ezintathu kunye nenketho yokuqhubeka ngenyanga emva kwenyanga emva koko.
Amanyathelo alandelayo asebenza kwiindawo zokuhlala kunye nezokufudukela kwamashishini.
Landela le Miqathango 6 yokubuyisela kwakhona iMail yakho
Ubuncinane iiveki ezimbini ngaphambi kokuba uhambe, uye kuyo nayiphina i-post yeposi eCanada uze ugcwalise ukubuyiswa kwefomu yesevisi yeposi.
Hlawula imali efanelekileyo. Iindleko zokuthumela iposi ziyahluka, kuxhomekeke ekubeni idilesi yakho entsha iphantsi kwiphondo elifanayo, ngaphakathi kweKhanada okanye kwelinye ilizwe. Kukho amaxabiso ahlukeneyo okuhlala kunye nezoshishino.
Ifom yeeNkonzo zeMeyili iya kuthunyelwa kwesosavayi yeposi kwidilesi yakho endala.
Cela ukuba utshintshe amakhadi ekheli.
Gqibezela utshintsho lwamakhadi edilesi uze ubathumele kubo bonke abasebenzisi ababhalisayo, kuquka ibhanki yakho, iinkampani zekhadi lesikweletu kunye nezinye iinkampani ozenza rhoqo ishishini.
Ukuba usasafuna i-imeyile yakho ibuyelelwe emva kwexesha lokuqala, iya kwi-post yokuposa uze uvuselele inkonzo phambi kokuba ixesha elide liye laphela. Hlawula imali ekhoyo.
Qaphela ukuba i-imeyile inokulungiswa nakweyiphi enye idilesi eKhanada, eUnited States nakwiidilesi ezininzi zamazwe ngamazwe. Ngenxa yezizathu zokhuseleko, kuya kufuneka ubonise iziqwenga ezimbini zokuchonga, ngokufanelekileyo i-ID yesithombe.
Yayinjani iCanada Confederation?
Iyiphi iSiza seDiskhidi?
Ukuphucula isakhono soLwazi ngokuFunda ngesiNgesi
Wild Samoan - Anoa'i - Maivia Uhlobo loNtsapho
Ukuqonda i-Project Delphi kunye ne-Unit Source Files